Tilmaamaha isticmaalka Tabex, dhammaan dabiici ahaan joojiya daawada sigaar cabista
Sida loo isticmaalo Tabex
Sida loo isticmaalo Tabex si loo joojiyo sigaar cabista 25 maalmood
Tabex waxaa lagu siiyaa hadal ahaan sida ku cad jadwalka soo socda: Haddii natiijooyinka aysan ku qanacsaneyn, daaweynta waa la joojin karaa oo 30 maalmood oo daaweyn ah ayaa dib loo bilaabi karaa 2-3 bilood ka dib. Daaweynta waa in lagu dabaqo iyadoo la raacayo jadwalka soo socda:
Maalinta 1 illaa 3: 1 kiniin 6 jeer maalin kasta iyadoo ay barbar socdaan is barbar dhig ku yimid tirada sigaarka la cabo. Dhamaadka maalinta saddexaad waxaad cabi doontaa sigaarkaagii ugu dambeeyay.
Maalinta 4 illaa 12: 1 kaniiniga 1/2 saacadood kasta.
Maalinta 13 illaa 16: 1 kiniin 3dii saacadoodba mar.
Maalinta 17 illaa 20: 1 kiniin maalin kasta.
Maalinta 21 illaa 25: 1 illaa 2 kiniinno maalin kasta.
Qorshahan daaweyntu wuxuu soconayaa qiyaastii hal bil, waxaana laga yaabaa in lagu celiyo wadarta wareegga laba bilood. Baadhitaanadu waxay muujinayaan inay tan waxtar badan leedahay iyadoo bukaanno badani joojiyaan sigaar cabista 60 maalmood ka dib.
Haddii aad tahay qof sigaar cabaya culus waxaa lagugula talinayaa inaad dalbato laba xirmo, markaa haddii wareegga koowaad uusan guuleysan waxaad isla markiiba bilaabi kartaa wareegga labaad.
Sigaar cabiddu waxay ka dhalan kartaa dareen aan fiicnayn dhammaan maamulkii Tabex. Qadarka sigaar ee uu qofku cabo dhammaan saddexda maalmood ee ugu horreeya waa in si tartiib tartiib ah loo dhimo. Joojinta sigaarka oo dhami waa inay dhacdaa ugu dambayn maalinta 3aad kadib bilowga bilowga dabcan.
Sidee Tabex ugu shaqeeyaa gudaha maskaxdaada? Daraasado caafimaad oo ku saabsan Tabex Ku saabsan Geedka Laburnum